Ma waxaa soo socda warkii ugu weynaa ee ku saabsan Carabta iyo Israa'iil? | Somalia News
Ma waxaa soo socda warkii ugu weynaa ee ku saabsan Carabta iyo Israa'iil?
Ma dhici kartaa mise ma dhici karto? Waa su’aal uu isweydiinayo qof walba oo hadda ku sugan Bariga Dhexe.
Madaxda Sacuudiga, oo taariikh ahaan lagu yaqaanno inay dhaliilaan Israa’iil iyo sida ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta, ma waxay ugu dambeyn kusii dhawaanayaan inay hagaajiyaan xiriirka ay la leeyihiin waddanka ay Warbaahinta Carabta ku tilmaamaan “Maamulka difaaca Yuhuudda”?
Hadal heyn qabsatay baraha bulshada oo ku saabsan arrintaas ayaa waxaa sii xoojiyay wareysi uu telefishinka Al-Carabiya siiyay madixii hore ee sirdoonka Sacuudiga, ahaaha danjirihii Sacuudiga ee mudadada dheer joogay Washington, Amiir Bandar Bin Sultan al-Saud.
Wuxuu Amiir Bandar si adag u cambaareeyay dhaliilaha ay hoggaamiyeyaasha Falastiiniyiinta u jeedinayaan heshiiskii nabadeed ee dhawaan dhex maray Israa’iil iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka Carabta.
“Dooddan heerka hoose ah ma aha mid aan ka fileynay in looga falceliyo tallaabada ay qaadeen mas’uuliyiinta dadaalka ugu jira sidii loo heli lahaa taageerada caalamiga ah ee ku aaddan danahooda,” ayuu yiri Amiir Bandar.
“Lama aqbali karo carada ay hoggaamiyeyaasha Falastiiniyiinta ka muujiyeen go’aanka madaxda Khaliijka.”
Hoggaamiyeyaasha Falastiiniyiinta ayaa go’aankii ay Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn kusoo celiyeen xiriirkooda Israa’iil waxay ku tilmaameen “khiyaano” iyo “mindi dhabarka laga galiyay Falastiiniyiinta”.
Amiir Bandar, oo muddo 22 sano ah soo ahaa Safiirka Sacuudiga ee Mareykanka, aadna ugu soo dhawaa Madaxweynihii Mareykanka, George W Bush – oo xitaa lagu naaneysi jiray Bandar Bin Bush – ayaa sheegay in nidaamka hoggaamineed ee Falastiiniyiinta uu guul darreystay.
“Waxay taageerada Sacuudiga u qaateen sidii wax ay xaq u leeyihiin,” ayuu yiri.
Wareysigiisa ayuu aad uga hadlay wax uu ku sheegay mowqif la’aan ka dhex jirta Falastiiniyiinta dhexdooda.
Erayada noocaas ah, oo kasoo yeeray sarkaal sare oo Sacuudi ah oo ku dhow qoyska talada haya, lagama sii deyn lahayn telefishin uu Sacudiga leeyahay haddii aysan soo ansixinin Boqor Salmaan iyo wiilkiisa dhaxalka sugaya ee Maxamed Bin Salmaan.
In hadalkan loo soo dhiibo qof sida Amiir Bandar oo kale ah, oo ah diblomaasi rugcaddaa ah oo ka mid ah tiirarka ay ku dhisan tahay boqortooyada Sacuudiga, waxay astaan cad u tahay in hoggaanka Sacuudiga ay suuragal tahay inay isku diyaarinayaan sidii ay iyaga iyo shacabkooduba ugu dambeyn heshiis ula gaadhi lahaayeen Israa’iil.
Shaki taariikhi ah
Waxay u muuqataa in marka la eego hadalka Amiir Bandar iyo ka raalli ahaanshihii aamusnaanta ahaa ee Sacuudiga uu ugu riyaaqsanaa heshiiskii ay Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn la galeen Israa’iil ay soo dadajin karto go’aan ay boqortooyadu ku caddeyso mowqifkeeda.
Boqortooyada ayaa la arkayaa in ay Israa’iil isugu soo dhawaanayaan si ka dhakhso badan sida ay isugu sii dhawaanayaan shacabka Sacuudiga iyo kuwa Israa’iil.
Muddo sannado badan, gaar ahaan deegaannada miyiga ah, ee magaalooyinka geesaha jira ee Sacuudiga, dadka u dhashay waddankaas waxay la qabsadeen in Israa’iil aysan u arkin oo kaliya cadow balse ay sidoo kale u arkaan dad Yuhuud ah.
Dadka reer miyiga ah ee aan isticmaalin tiknoolojiyadda casriga ah iyo internet-ka ayaa qaarkood xitaa waxay aaminsan yihiin in Yuhuudda ay xilli ka mid ah sanadka cabaan dhiigga carruurta.
Hadda oo ay sii bateen dadka isticmaala baraha bulshada, way sii baaba’ayaan sheekooyinkaas la sameeyay ee aan sal iyo raadka lahayn.
Dadka reer Sacuudi Carabiya hadda in badan oo ka mid ah waqtigooda waxay ku bixiyaan internet-ka iyo helitaanka wararka caalamka.
In si tartiib tartiib ah loo cirib tiro arrimahan waxay sabab u tahay in Sacuudiga uu ku dagdagi waayo heshiiska taariikhiga ah ee dalalka saaxiibbadiisa ay la saxiixdeen Israa’iil.
Dhibaatadii ka timid Saadaam
Sacuudiga iyo dalalka kale ee Khaliijka waxay muddo tobannaan sano ah ka mideysnaayeen taageeridda Falastiiniyiinta, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba.
Laakiin markii uu hoggaamiyihii Falastiiniyiinta, Yaasir Carafaad, xulafeystay madaxweynihii Ciraaq Saadaam Xuseen xilligii uu qabsaday Kuwait sanadkii 1990-kii, dalalka Khaliijka waxay dareemeen in la khiyaanay.
Kaddib markii uu Mareykanka xoreeyay Kuwait 1991-kii, waddankaas waxaa laga soo eryay dhammaan bulshadii reer Falastiin ee halkaas ku nooleyd, waxaana lagu baddalay kumannaan Masaari ah.
Muddodheer ayey hoggaamiyeyaasha kale ee gobolka xukumayay ku qaadatay inay kasoo kabsadaan “khiyaanadii” Carafaad.
Qofka dadaalka ugu badnaa ku bixiyay in Carabta laga daaweeyo dhaawacaas wuxuu ahaa boqorkii Kuwait ee dhawaan geeriyooday, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, oo bishii lasoo dhaafay dhintay, isagoo 91 jir ah.
Waddamada Imaaraadka, Baxreyn iyo Masar – oo xulafo la ah Sacuudiga – waxay dhammaantood heshiis nabadeed kula jiraan Israa’iil, dib ayeyna usoo celiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed.
Laakiin Sacuudiga wuxuu si tartiib tartiib ah ugu tallaabsanayaa inuu baddalo siyaasaddiisa ku aaddan Israa’iil.
Sidaas daraadeed, heshiis nabadeed oo dhex mara boqortooyada Sacuudiga iyo Israa’iil hadda waa suuragal.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54500370original article
Previous articleXog: Cali Khaliif Galeyr walaashiis oo shalay aaskiisa ku hanjabtay arrin xasaasi ah
Next articleMadaxweyne Muuse Biixi oo xadhiga ka jaray Buundo laga hirgeliyay magaalada Borama